Ciise - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Nebi Ciise)
1 Maryama Ciise Hooyadiis
1.1 Shakhsiyada Maryama
1.2 Qoyska Cimraan
2 Kitaabka Injiil
3 Nabiyada iyo Rasuusha
4 Jadwalka Nabiyada iyo Rusuusha Kutubta lagu soo dejiyay
Maryama Ciise HooyadiisEdit
Sawir-gacmeed Beershiyaaan ah oo muujinaya Maryama iyo wiilkeeda Nebi Ciise.
Maryam, Maryama, Maryam bintu Cimraan (Af-Hebrow: מִרְיָם‎ Af-giriig: Μαρία; Af-Laatiin: Maria; Ge'ez: ማርያም , loo qoro: Marīam, loogu dhawaaqo: "Mariyam"; hooyo u ah: ﻧﺒﻲ ﻋﻴﺴﻰ; "Nebi Ciise"; ama: يسوع, loogu dhawaaqo "yasuuca") waxay ahayd qof muuminad ah oo dhashay isla markaana hooyo u ahayd nebigii Alle u soo direy reer banii Israaiil waa Nebi Ciise (c.s).
Markey taariikhdu ahayd qiyaastii 20 sano C.H (Dhalashaddii Ciise Horteed) ayaa Maryama ku dhalatey magaalada Baytulaxam ee ku taala dhulka ay Falastiiniyiintu degaan, waxay isla magaaladani ku dhimatey markey taariikhdu ahayd qiyaastii 100 ilaa 120 sano C.D. Maryama waa qofta dumar kali ah ee lagu xusay marar badan kitaabka Quraanka ah. Ilaahay (koreeye) wuxuu Quraanka kariimka ah ku yidhi:
Is-deji! ayay malaa'igtu ku tidhi: “Maryamaay! Ilaahay ayaa ku doortey adiga, waxaanad tahay mid nadiif ah oo laga kor mariyay dhamaan dumarka bulshooyinka oo dhan.”
—Quraan, suurada 3aad (Al Cimraan), aayada 42aad
Dhinaca kale, suurada 19aad ee kitaabka Quraanka waxaa loogu magac-daray Maryama; taasi oo ka waramysa nolosheedii iyo camalkeedii. Intaasi waxaa dheer, Maryama bintu Cimraan waxay ka mid tahay sideeda qof ee loogu magac-daray suurad ka mid ah Boqol toban iyo afar Suuradood ee kitaabka Quraanka kariimka ah.
Maryama bintu Cimraan waxay ahayd qof wanaagsan oo diinta Alle si fiican u heeysatay isla markaana cabsida Ilaahay dartiis u gashay masaajidka oo hooy u ahaa inta u badan nolosheeda. Wanaageeda iyo shakhsiyad fiicni darteed, Maryama bintu Cimraan waxay lahayd magacyo iyo naanaysyo badan, kuwaasi waxaa ka mid ah: Hooyadii Ciise, Mucjiso Alle, Tusaalaha Dumarka, Geesiyadii Xaqa, Boqoradii Wanaaga, Saai'ma, Mustafiya, Raaqiyah (Rāki’ah), Saajidah (Sājidah), Qaanitah (Qānitah), Run-sheeg (Siddiqah), Taxiirah (Tāhirah) iyo kuwo kaleba.
Dhinaca kale, Maryama bintu Cimraan waxay ahayd hooyo leh mucjiso aad u wayn, sababtoo ah ayadoon u tagin ama la kulmin wax nin ah ayaa waxay uureysatey ka dib na dhashay Sayid Ciise Masiixi, arintaasi oo Alle (s.w) ka dhigay tusaale iyo waxkuqaadasho cajiib badan.
Maryama waxaa Ilaahay (koreeye) ku xusan kitaabka Quraanka kariimka ah ee lagu soo dejiyay Nebi Muxamed, waxaana jirta suurad loogu magac-daray ayada oo la yidhaado Suuratu Maryam oo ah suurada 19aad ee Quraanka. Intaasi waxaa dheer, inta jeer ee kitaabka Quraanka lagu xusay Maryama way ka badan tahay inta jeer ay ku dhex-jirto Kitaabka Injiileed ee lagu soo dejiyay wiilkeeda Nebi Ciise Masiixi.
Guud ahaan, Maryama bintu Cimraan waxay ku dhalatey mar ahaantaana ku nooleyd nolosheeda oo dhan magaalada Baytulaxam oo ku taal dhulka ay Falastiiniyiintu degaan sanado badan ka hor bilowgii taariikhda miilaadiga.
Sida ku xusan kitaabka Quraanka kariimka ah Maryam waxay ka soo jeedaa mar ahaantaana ku abtirsataa qoyska reer Cimraan oo ah aabaha Nebi Muuse, Nebi Haaruun iyo walaashood Miryama. Sidoo kale, Maryama waxaa loogu yeedhaa "Maryam bintu Cimraan" taasi oo loola jeedo gabadhii reer Cimraan, laakiin aabaheeda saxda ah kuma xusna diinta Islaamka, laakiin diinta Masiixiyada waxay aabaheed ku sheegeen Jaawjim (Joachim). Intaasi waxaa dheer culimada qaar waxay sheegeen in Maryama ay ka soo jeedo Nebi Haaruun oo ah wiilka Cimraan iyo walaalka Nebi Muuse iyo Miryama.
Dhinaca kale, Maryama waxaa hooyo u ah sheekhada Anna (حنة) qoftaasi oo ahayd qof aad ugu wanaagsan cibaadada iyo diinta Alle.
Injiil Kitaabka Injiil (Af-giriig: Αγία Γραφή, Βίβλος; ; ; "kitaabu ciisah") waa kitaab Ilaahay ku soo dejiyay Nebi Ciise (c.s). Erayga Injiil macnihiisu waa war wanaagsan ama bishaaro. Inkasta oo mararka qaarkood Axdiga Cusub lagu magcaabo Injiil, haddana waxaa si gaar ah eraygan loogu yeeraa mid walba oo ka mid ah afarta qoraal ee ugu horreeya Axdiga Cusub oo kala ah Mateeyos, Maarkos, Luuqa, iyo Yooxannaa.. Ciise Ilaahay ma Ahan. Qorniinka Quduuska ah waxay ina baraan inaannu “leennahay Ilaah keliya” oo uu Ciise Masiixna ahaa rasuulkiisa isla hooseeya. (1 Korintos 8:6) Ciise si cad buu u yiri Ilaah baa iga sarreeya oo isagaa dunida ii soo diray. Ciise waa nebigii Ilaah, ma ahan Ilaaha Qaadirka ah. 
Intaasi marka laga yimaado waxaa jira tiro kale oo nebiyo iyo rasuul ah oo Rabbi u soo diray kutub, laakiin inagu aqoon uma lihin kuwaasi, waxaana tusaale inoo ah: Nebi Ismaaciil, Nebi Yacquub iyo Nebi Yoonis oo dhamaantood leh kutub aynaan cilmi u lahayn.
Saldhiga iyo xudunta diinta Islaamka.
↑ "taariikhdu ahayd qiyaastii 20 sano C.H"
↑ "100 ilaa 120 sano C.D"
↑ "Quraan, suurada 3aad (Al Cimraan), aayada 42aad"
↑ "sideeda qof ee loogu magac-daray suurad ka mid ah Boqol toban iyo afar Suuradood ee kitaabka Quraanka"
↑ "la kulmin wax nin ah ayaa waxay uureysatey ka dib na dhashay Sayid Ciise Masiixi"
↑ "Maryama bintu Cimraan waxay ahayd hooyo"
↑ "aabaha Nebi Muuse, Nebi Haaruun iyo walaashood Miryama"
↑ "culimada qaar waxay sheegeen in Maryama ay ka soo jeedo Nebi Haaruun"
↑ "hooyo u ah sheekhada Anna"
↑ Axdiga Cusub
↑ Imanshadii Masiixa
↑ Ciise Fiidiyowyo
↑ Ilaahay Nebiyadiisa Baan Ka Baran Karnaa
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciise&oldid=218505"
Last edited on 7 Oktoobar 2021, at 08:12
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 7 Oktoobar 2021, marka ee eheed 08:12.